पृथ्वीमा डाइनोसरको अन्त्य र मानिसको उत्पतिको रोचक कथा - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
११ कार्तिक २०७५, आईतवार २२:४३ October 28, 2018 Nonstop Khabar
करिब साढे १४ करोड वर्षसम्म पृथ्वीमा राज गरेका डाइनेसोरहरु एकाएक कसरी लोप भए ? जल, जमिन, जंगल जताततै पाइने डाइनेसार लोप हुनुपर्ने कारण के थियो? पृथ्वीमा के त्यस्तो घटना भयो जसका कारण डाइनसोरको नामोनिशान नै मेटियो ?
आकशीय पिण्ड पृथ्वीको सतहमा खसेपछि क्रेटासियस महाप्रलयको भएको मानिदै आएको छ। साढे ६ करोड वर्षपहिले पृथ्वीको तापक्रम औसत थियो। जताततै हरियाली अनि सफा वायुमण्डल थियो। अहिले जस्तो प्रदूषित थिएन। जमिनमा, पानीमा बस्ने अनि उड्ने डाइनोसोरको युग थियो। भ्यागुता, कछुवा, गोही, शंखे किरा जस्ता प्रजातिहरु पनि थिए।
डाइनोसोरको त्यो युगमा प्राथमिक स्तनधारी जीव लुकेर बस्थे। मुसा जस्तो देखिने ती स्तनधारी जीवहरु सुरक्षाको कारणले जमिनमुनि लुकेर बस्थे। स्तनधारी र डाइनासोरमा फरक थियो। स्तनधारीले सिधै बच्चा जन्माउँछन् भने डाइनोसोरले अण्डा पार्थ्यो । जमिनमुनी बस्ने यी स्तनधारी अहिलेको आधुनिक युगका लागि वरदान हो। आधुनिक युगमा स्तनधारी प्रजातिको प्रभुत्व छ, त्यसमा पनि मानवको।
त्यसबेला एउटा १० किलोमिटर चौढाइ भएको आकशीय पिण्ड पृथ्वीतिर आउँदै थियो। पृथ्वीको गुरुत्वकार्षण क्षेत्रमा प्रवेश गरेसँगै उक्त पिण्डको गति एकाएक बढ्यो । ७० हजार किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा पिण्ड पृथ्वीको नजिक पुग्छ। वायुमण्डलीय क्षेत्रमा पुग्ने बित्तिकै घर्षणका कारण पिण्ड आगोको गोलामा बदलिन्छ। आगोको गोला यति शक्तिशाली थियो कि यसको ८ सय किलोमिटरको रेडियसमा आउने जीवहरु खरानी भए।
महाप्रलयको केही लाख वर्षपछि पृथ्वी स्थिर हुँदै गयो। बाँचेका ती स्तनधारीहरु पनि विकास हुँदै गए। उनीहरु आकारमा पनि ठूला हुँदै गए। स्पिेसियसन (नयाँ प्रजाति बन्ने प्रकिया) पनि हुँदै थियो। नयाँ प्रजातिको उत्पत्ति हुँदै गयो। मानवको प्राचिन पुर्खा पनि त्यही अनुरुपमा विकास हुँदै थिए। करिब ४ दशमवल ७ करोड वर्ष पहिले पृथ्वीको अवस्था सामान्य भइसकेको थियो। औसत तापक्रम २४ डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो।
तर, पृथ्वीमा अझै प्राकृतिक हलचल हुने क्रम भने रोकिएको थिएन। क्रेटासियस महाप्रलयपछि लाखौ वर्षसम्म पृथ्वीको टेक्टोनिक प्लेटहरु हलचल भइरह्यो/जुन क्रम अहिलेपनि जारी छ। महाद्वीपहरु सर्न थाले। महाद्वीपहरु सर्ने प्रक्रियालाई कन्टिेनन्टल ड्रिफ्ट भनिन्छ। यिनीहरु वर्षमा एकसेन्टिमिटर वा त्योभन्दा बढी सर्न सक्छन्। यही सेरोफेरोमा इन्डियन टेक्टोनिक प्लेट र यूरेसियन टेक्टोनिक प्लेट एकआपसमा ठोक्किए। त्यसको प्रतिक्रया स्वरुप हिमालय श्रंखलाको निर्माण भयो। हिमाली श्रंखलाको निर्माणसँगै हाम्रो देशको भूगोल निर्माण भयो। संसारको सबैभन्दा ठूलो चुचुरो सगरमाथाको उत्पत्ति त्यही बेला भयो। हिमश्रंखलाको बरफबाट धेरै हिमनदीको उत्पत्ति भयो। नदी र हिमालयको उत्पति भइसकेपछि कमी थियो त सिर्फ मानव जातीको। यसको थप विवरण वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनरको किताब ‘ओरिजन अफ कन्टिनेन्ट्स एण्ड ओसन्स’मा उल्लेख छ।
महाप्रलयपछि अफ्रिकाको रिफ्ट भ्यालीको उत्पत्ति नभइदिएको भए ती एप्सहरु रुखमै बस्थे होलान्। सायद मानव प्रजातिको उत्पत्ति नै हुदैन थियो होला। कान्तिपुरबाट
यो साता एक अर्ब ५४ करोडको शेयर कारोवार